Florida Cannabis Gweta - Mr. Cannabis Law - Dustin Robinson
Florida Marijuana Mitemo Inotsanangurwa
Teerera iyo paPodCast kana Tarisa iyo YouTube pa Florida Cannabis Mirairo Nezve Florida Florida Cannabis Lawyer yatinobvunzana - shanya Mr. Cannabis Mutemo, Dustin Robinson, pawebsite yake: Mr. Cannabislaw.com
Mamiriro eFlorida Cannabis / Marijuana Laws
"Florida Cannabis Mirau" vanotambura nehuwandu hwekusakara uye hwevanhu vanochengetedzeka izvo zvichiramba zvine hunhu pamusoro pecannabis, iyo inonzi mbanje zviri pamutemo mudunhu reFlorida. Florida ine yakasimba chirongwa chekurapa mbanje chirongwa nevanoda kusvika zviuru mazana matatu varwere. Kunyoreswa kwakazara kwembanje muFlorida kungango simuka kubva kuvhoti sezvo mutemo wechiputa wembanje wakauya - tsvaga 300,000 yevhoti yekunyoresa mbanje muFlorida.
RELATED POST: Mashandiro Aungaita Mubatsiri weCannabis Bhizinesi Rako
Maererano ikozvino Florida mitemo cannabis, kunyangwe zvidiki diki zvembanje hazvisi pamutemo mudunhu iri. Vakuru vacho vanoti kutora magiramu makumi maviri kana mashoma mbanje imhosva zvisirizvo. Iyi ndiyo yazvino Florida Florida cannabis mitemo.
Izvi zvichachinja sei mune ramangwana, uye isu tichagona kuona imwe shanduko muFlorida cannabis mitemo? Panguva ino, tinogona kuona nhoroondo yemitemo ye cannabis muFlorida. Kurapa mbanje kwakanyoreswa zviri pamutemo mune ino nyika, nepo kushandiswa kwekuvaraidza mbanje muFlorida kuchiri pasi pemubvunzo.
Ndeapi aripo iyezvino Florida Cannabis Laws?
Kana iwe uine 20 gramu kana pasi pe mbanje, unogona kubhadhariswa faindi yakakwana yemadhora zviuru. Iwe unogona zvakare kuwana mutsara wepamusoro wegore rimwe jeri renzvimbo yenyika. Rudzi urwu rwema misdemeanor rwunonyanya kushomeka pane kudarika. Kuti uve anokwanisa kuwana nyowani, unofanirwa kuve nemakirogiramu anopfuura makumi maviri emari mbanje.
Migumisiro yacho yakakura kana ukatengesa mbanje. Izvi zvinoshanda kunzvimbo dziri mukati memamirion zviuru zvechikoro, koreji, paki, kana imwe nzvimbo yakatarwa inorangwa. Iwe unogona kuwana mubhadharo wepamusoro wemadhora zviuru gumi nemutongo wepamusoro wemakore gumi nemashanu. Iyi ndiyo mitemo iripo yekutora mbanje muFlorida.
Iyi mitemo iri pasi pekugadzirisa kukuru, kunyanya nekuda kweiyo rondedzero yemabhiriji anogona kuchinja iyo Florida mbanje indasitiri. Dare Repamusoro reFlorida raigona kusarudza kushandura mutemo wekutonga mbanje muFlorida mukupera kwa2020.
Muna 2016, 70% yevavhoti muFlorida vakasarudza kunyoresa mbanje pamutemo sechimwe chikamu chebumbiro. Pakupera kwa 2017, mbanje dzekurapa dzakanyoreswa zviri pamutemo munzira yeedibles, mapiritsi, mafuta, uye mafup. Iyo yaive nhanho yakakura kune varwere veFlorida vaida kushandisa mbanje yekurapa yemamiriro akasiyana ekurapa.
Iko kurimwa kwehemp muFlorida kwakava chiyero mune indasitiri. Ichi chaive chikamu cheDhipatimendi rekurima neConsumer Services chirongwa kubva muna 2019. Izvi zvakatungamira kune inonzi "green rush" mune ino nyika yakagadzira sarudzo dzakawanda kumabhizinesi madiki uye epakati.
Zvino, Muna 2020, mabhiri akaziviswa anotsigira chirongwa chekutangisa mbanje muFlorida. Iyi danho ine vatsigiri vazhinji vakazvipira, uye mutemo wepamutemo wave kuda kuchinja zvachose.
Chii Chichachinja muFlorida Cannabis Laws muna 2020?
Pane fungidziro huru dzekuti kushandiswa kwekuvaraidza kwembanje muFlorida kunogoneka kubva muna 2020. Uku ndiko kuziviswa kubva kune vekutanga Florida mbanje matanho. Vanoti kushandiswa kwekunakidzwa kwembanje kunogona kuchinja maonero ese eindasitiri.
Makambani mazhinji achavhura makambani uye zvitoro uko cannabis zvigadzirwa zvichakwanisika kutenga. Izvi zvinowedzera mikana yebhizinesi kuvarimi, varimi, uye vanotengesa.
Panguva imwecheteyo, mukati me2020, kushandiswa kwembanje pasi pemamiriro ezvinhu ari nani kuchaitika kune veterans. Vanobata marezinesi vachakwanisa kukura, kuedzesa, kuedza, uye kutengesa zvigadzirwa pasina middlemen. Iyo yakawedzerwa rondedzero yezvirwere ichawedzerwa kuti inogona kurapwa ne mbanje yekurapa. Uye zvirango zviripo zvekutorerwa mbanje zvichataridzwazve nedare.
Shanduko idzi dzese dzichange dzichiuya muna 2020. Iyo itsva Florida cannabis mitemo ichava shanduko huru kune vagari vemuFlorida vanoda kushandisa mbanje zviri pamutemo.
Nokukurumidza Izvo Zvirinani
Florida cannabis pamutemo mitemo ichaunza hukuru shanduko mune iyo yakazara mbanje maonero mune ino mamiriro. Pari zvino, gumi nembiri dzinoti zviri pamutemo mbanje kune vakuru vevanopfuura makore makumi maviri nemasere. Marijuana zviri pamutemo kushandiswa kwechiremba mumatunhu makumi matatu nematatu.
Mune ramangwana, tichapupurira kuwedzera kwehuwandu hwekuputa mbanje. Kunyanya pakati pevarwere vari kushandisa mbanje nekuda kwekurapa. Vagari vemuFlorida vachakwanisa kushandisa mbanje kunevaraidzo kana zvese zvikwereti zvikaita pakati 2020.
Florida iri kuvhura mikova yaro shanduko huru muindasitiri yechiputa, uye maitiro acho ari kuramba achikura. Kurima, kugovera, uye kugovera kunofanirwa kuunza mikana mikuru kumabhizinesi nemakambani madiki. Nemutemo wembanje muFlorida, isu zvakare tichagona kushandisa uye zviri pamutemo kutenga mbanje. Ichi chichava danho rakakura kumberi mukuchinja kweFlorida cannabis mitemo.
Nhasi tichave tiri kutaura zvese nezveFlorida cannabis mitemo. Mhoroi munhu wese, zita rangu ndiTom Howard. Kana iwe uchida chero chinhu, iwe unogona Google Cannabis Gweta uye uchagona kundiwana. Asi nhasi isu tine chikamu chakakosha kwazvo. Isu tichave tichitaura zvese nezveFlorida cannabis mitemo naDustin Robinson. Dustin, ndinokutendai nekubatana nesu.
Florida Cannabis Gweta - Dustin Robinson
Ehe, iwe unoziva maitiro iwayo. Neraki isu tiri kuita zvirinani kupfuura zvataive tamboita. Zvisinei, ndizvo zvinoitika kana iwe uine mhenderekedzo yegungwa kuratidza. Uri kubva kupi kuna Dustin?
Ndiri pano muFlorida. Ndiri muSouth Florida yezuva. Kunaka kwemamiriro ekunze kunze kuno.
Saka hausi kupfeka fururu yakarongedzwa senge ndiri pano nekuti yakaita 25 degrees kunze.
Ehe, kwete, zvakanaka kunze. Ndanga ndiri kunze muchikepe nezuro. Nhasi izuva rekushanda. Kunaka kwezuva chaiko kunze kwehwindo.
Ndeapi mhando yezvinhu iwe yauri kushanda paFlorida cannabis?
Chii chiri kuitika neFlorida Cannabis Mitemo
Tine zvakawanda zvakasiyana zvinhu zviri kuitika pano muFlorida, pachena kwete kuverenga izvo zvinhu zviri kuitika kudivi rehemp. Tine zvinhu zvakawanda padivi rembanje. Ingori nhoroondo yekukurumidza pano muFlorida. Takapa marezinensi akati wandei, atinodaidza MMTCs pasi apa, Kurapa Marijuana Kurapa Ma Centres. Ndiwo marezinti akaumbiridzwa akaunzi muFlorida. Vakapihwa marezinesi kuburikidza neDhipatimendi rehutano. Zvino mushure meizvozvo maive nematare akati wandei pano muFlorida. Saka parizvino izvozvi tine marezinesi makumi maviri nemasere uye mazhinji emarezinesi akapiwa kuburikidza nezvibvumirano zvekugadzirisa, kunze kwe [crosstalk 22:00:01], taura izvozvo zvakare.
Izvo zvinonakidza, nekuti muno muIllinois ivo vari kufunga nezve maitiro avanofanirwa kuita bhajeti yekumhan'ara nyika uye ivo vane mamwe marezinesi erudzi rwekuvakirwa mune yakadzika mutemo. Saka ndiri kunetsekana kana akawanda zvibvumirano zvekugadzirisa zvichave zvemarezinesi?
Ehe, ndizvozvo, ndingati chero nyika iri kuita chero marezinesi inofanirwa kugovera zviwanikwa zvakakosha zvekuverengera. Ndinoziva Missouri ichangobva kuzivisa ivo vakunda. Ini ndanga ndichishanda nemapoka akati wandei pazvikumbiro zveMissouri uye vanyori vakanaka vekushandisa, kana vachizvinyora, ivo vari kuzvinyora kuitira kuti vakwanise kuzvimisikidza kuti vakwanise kuunza chikonzero chezviito kusvika pamwero iwo usatore rezinesi. Saka ndicho chaizvo chirongwa chinoshandiswa nevanhu vazhinji. Uye muno muFlorida marezinesi aikosheswa kwazvo. Ndinoreva kuti tine-
vertical kubatanidzwa kweFlorida Cannabis Bhizinesi
Ehe. Saka waizowana… Pepa racho raitengesa madhora zviuru makumi matanhatu. Ndizvozvo, hapana zvivakwa, hapana mashandiro. Saka nezvakawanda kwazvo pamutsetse, vanhu havana hanya nekubhadhara madhora miriyoni imwe mumabhadharo emugweta kuyedza kuwana iyo madhora miriyoni makumi mashanu. Ipo kune dzimwe nyika, kukosha kweiyo rezenisi kungasave kwakakwirira. Kana iwe uine pepa rakakosha, ngatiti, madhora mazana mashanu ezviuru kana miriyoni, iwe ungangove wakaderera kubhadhara gweta mashoma mazana anonetsa pamusoro pacho. Asi kana marezinesi akakosha makumi mashanu emamiriyoni, iwe unenge uchiti, "Unoziva chii, ndichatora tsumo yangu." Uye dzimwe nguva vamwe vanhu vari kupa mari kuti litigation iyo inoona mikana-
Batirira. Uye hazvisi izvo ... Kwete, izvo hazvisi chokwadi. Chii icho kana, mirira ... champion iyo kukunda uye zvakashata isu tichafanirwa kudzidza mamwe maArcane emutemo mazwi. Saka vanhu vaive, hautenderwe kuzviita. Zviri pamutemo chinhu, kukwikwidza uye kugadzirisa. Huye, mukufunga kuti haufanire kunge uchikwanisa kuita Champerty kwakafanana nekupinda mudenga repati yebato kukurudzira mhosva. Zvakanaka ndiko kugadzirisa uku. Asi zvakanyanyisa irwo rudzi rwechimwe chinhu icho mumwe munhu asiri iye munhu anehukama nedare ane chekuita nemari mune icho. Saka ndinofungidzira ivo vanobvumira shasha muFlorida?
Ini ndakanga ndisati ndambonzwa iyo kududzirwa. Asi ndinoreva, pakupera kwezuva, pane dzimwe nguva vanhu vanomhan'ara uye vasingakwanise kuvabhadhara uye vamwe vanhu vanouya kuzopira mhosva mudare redzimhosva. Saka hongu, ini ndinofunga iyo yemakwikwi chinhu chingangonyanya kutarisisa izvi-
O, kubva panguva dzechisimba-
Asi saka iwe unofunga kuti panogona kunge paine zvisina kukodzera kana iwe uchibuda uye iwe uri kuedza kutsvaga vanhu kuti vataure mhosva? Izvi ndizvo zvimwe zvinonongedzwa, asi ichi chiitiko apo vanhu vaida kuisa faira mudare. Ivo vaisave nemari yekushandisa madhora miriyoni imwe pazviri. Saka ivo vakapinda mukati vakawana varidzi vemo vaive nechikwereti chekumhan'ara mari yekuchinjanisa imwe mari. Uyezve vakawana rezinesi uye vakakwanisa kurivhura nemadhora makumi mashanu nemakumi mashanu emadhora. Saka zviri pachena manje kuti ivo vakaburitsa… Ivo vachangoburitsa marezinesi matsva masere kuburikidza nekugadzirisa. Ivo vanonzi iwo anongedzera. Ava vanhu vakapenya mukati meimwe pfungwa mune yekutanga application process. Saka parizvino isu tine masere marezinesi kunze kwe1 ayo ari mutsva mutsva uye vari kuyedza kukwidza capital kumhanyisa vertiki yakabatanidzwa kambani. [crosstalk 55:60:22] Zvinoda mari inoita zviuru makumi maviri zvemadhora.
Kana iwe uchiti mutserendende, iwe unoreva kuti ivo vanokura, kuti vanochengeta, izvo ivo vanoita, ivo vese vari mune imwe, handizvo? Uye ndicho chimiro cheFlorida.
Ehe, saka izvo zvinopenga muFlorida ndezvipi zvavanofanira kuita, ivo vanofanirwa kukura, kuita, kupa uye kuburitsa. Uye haugone kubvumirana chero neizvozvo. Saka hazvina kuita kunge paine chero makambani ekuzvitakura ari kuita kuburitsa. Sangano rega rega rine rimwe rebasa rekutumira. Uye iwe unogona kufungidzira izvo zvinova zvisingabatsiri kana iwe uine vamwe vavakidzani vaviri padyo nepadyo. Imwe iri kuraira kubva kune imwe disensary, imwe iri kuraira kubva kune imwe disensary uye iwe une motokari mbiri dzinotyaira kuendesa kusvika padyo. Zvaizove nehungwaru kana paine service yekutakura yakakwanisa kutora kubva kune maviri ese ma dispensaries mumota imwe. Uye saka pane zvimwe zvisina basa uye pane akati wandei mabhiri mune ino inotevera yemisangano chikamu uye ivo vaiedza kufunga. Iko chaiko kuFlorida Dare repamusoro, saka matare epasi akatoona chimiro icho kunge chinopesana nebumbiro redu reFlorida.
Chii chakaitwa neFlorida, nekuti ngatitaurei nezvekuti Florida yakava sei nyika yekurapa mbanje.
Mashandisiro Ako Matanho Marijuana Began
Florida kutanga tave nemutemo uyo uri kungoita wakanyanya kwazvo, wakaderera THC mbanje-
Zvainzwika zvakanyanya kunge West Virginia. Isu tanga tichitaura nezvayo kumashure, West Virginia, haugone kuwana maruva, haugone kuwana vapfu, hapana chinosvuta uye unofanirwa kugadzirisa. Ndiyo nzira iyo Florida yakatanga nayo? Hauna kubvumirwa kuve neruva here?
Ehe. Saka, zveFlorida, ini ndiri kunyatsoshanda kuWest Virginia app izvozvi uye hongu, ndiyo nzira iyo West Virginia inotaridzika. Uye hongu, Florida yakatanga ne chete kwazvo, yakapusa uye yakaderera dosi. Asi izvo isu zvatakauya nazvo zvakanyanya, kwaive nekunyorwa kwebumbiro. Dudziro yebumbiro yakagadziriswa yakataura kuti maMMTC aya, Medical Marijuana Kurapa Centers anogona kukura, kuita, kupa kana kuburitsa. Saka raive neshoko iro kana mubumbiro redu reFlorida. Uyezve muna 2017 apo iyo paramende yakaenda kunobata iyo bumbiro rechisarudzo, vanoridaidza ... Ivo vakati icho chakakura, chiitiko, kutengesa uye kuburitsa, zvichinyatsogadzira ichi chakasanganiswa chakabatanidzwa chinofanira kuita zvese zvacho.
Musiyano uripo pakati pekubatana uye wekumanikidzana uchitenderedza unobvumidza. Imwe yacho ndeyokubatana uye imwe yacho iri, handina chokwadi chekuti vanoidana kutii.
Kubatanidza / Disjunctive uye Florida Marijuana Mitemo
Ehe, ini ndinobvunzwa zvakawanda nezvenyaya iyi yedare uye [inaudible 00:07:38] uye nemumwe munhu akafanana, "Ah, zvakawoma. "Handifanire kuziva zviri pamutemo." Ndakaita senge, "Kwete, zviri nyore. Musiyano uripo pakati pe- uye. Bumbiro rinoshandisa izwi kana zvichireva kuti unogona kurima, kuronga, kupa kana kuburitsa. Chirevo cheFlorida chakapinda ndokushandisa izwi uye, zvinoreva kuti mubatanidzwa unofanirwa kuita zvese izvo zvinhu. " Saka parizvino Dare Repamusoro soro reFlorida riri kutora nyaya iyo uye zviratidzo zvese zviri kunongedzera kwavari zvichisimbisa mutongo uyu, izvo zvichinyatso kureva kuti kubatana kuchaputswa uye ivo vanofanirwa kudzoka vagadzira chimiro chakatsiga pasi apa.
Iko kubatana kupesana nekusabatana. Saka conjunctiva iri uye, uye disjunctive iri kana. Kwete ini ndinoifarira. Izvi zvakafanana, nekuti iri pakadzika kwazvo. Isu tinotaura nezve cannabis kunyoreswa kubva pamutemo maonero sekupesana kubva pane maonero ehurongwa. Asi pane yakawanda mutemo unoenderera mune izvo kutaurirana. Uye sekufanana muFlorida kana muIllinois, tichava nematare uye munorwa pamusoro pechinoreva izwi uye kana, ndinoreva kuti ndizvo chaizvo zvazviri. Uye pavanoti, “Kana,” zvinofanirwa kunge zviri mune zvinonyangadza ipapo. Uye nekudzvinyanisa nekuzvibatanidza uyezve nekuvaka mune imwezve madhora zviuru zana, madhora zviuru mazana maviri zvemakumi matatu yekumhan'ara nyika kuti ugokwanisa kuwana rezinesi. Izvo zvaisa mutengo werennisis rezinesi, kwete muNyika yeFlorida, asi chero nzira yakakwira kupfuura yaifanira kunge iri kana inogona kunge iri.
Ehe, hongu, hongu, hongu. Iwo marezinesi akanyanya kukwirira uye akatendeseka, bazi rezvehutano riri kushandisa matani emari kutambisa izvi uye ivo havana zviwanikwa zvekuzviita. Uye zvakare kutora kubvisa kubva kubhajeti ravo kuti vonyatsoomesera iwo chaiwo iwo marongero ayo MMTC inofanirwa kutevedzera. Uye saka zvirokwazvo hapana kusimbisa kwakawanda sekufanirwa kuve kuri, nekuda kwekuti DOH chaiyo haina zviwanikwa.
Hazvina. Iko kunzwisisa kwangu kuti kune chete sevatambi vana muFlorida. Icho ichokwadi here? Sezvinoita vangani-
Original Florida Marijuana License
Saka rezinesi rekutanga raive rakaita sei, ndinofunga vakapa marezinesi mana kana mashanu. Saka iwo machinda aive nemusoro wakakura kutanga pamusika. Uyezve mukutevera izvo ivo vakaita rezinesi, uye ikozvino tasvika makumi maviri nenesi. Parizvino pane angori masere kana mapfumbamwe chete ari kushanda. Kunze kwevasere kana vapfumbamwe, vana kana vashanu vavo vari kutonga chaizvo, nekuti vaive nemusoro mukuru.
Saka hapana cap, saka disensary uye mutemo, vakati vakabatiswa pamakumi maviri neshanu makanzuru. Saka havangogone chete ivo kuti ivo vakure, vatore uye vatore, uye nekusafanana neI Illinois uko vakabatirirwa hunyanzvi hwayo hwekurima pamamita zviuru zvishanu. MuFlorida, iwe hausi caps pane yako kukura. Hausi kubatika pane yako mashandiro. Uye yekugovera, iwe unogumira kunzvimbo makumi maviri neshanu. Asi kana iwe uchisvika kune… Sezvo isu tasvika ku… Varwere zviuru zana, iwe unowana mamwe mashanu maivhiri. Saka iko zvino tasvika pane vanopfuura mazana matatu ezviuru varwere. Saka imwe neimwe yemasosi akaumbana akabatanidzwa anogona kuva nemakumi maviri neshanu kusanganisira makumi mana emabhaisikopo.
Uye kwaivawo nemamwe matare ainyatsobvumira mamwe eaya marezinesi kuti avhure kunyange mamwe makanzuru. Saka ndosaka vachirevera kune super marezinesi. Uye zvinodhura zviri pachena huwandu hukuru hwemari kuti irege kungokura chete, kwete kuita chete, asiwo kuyedza kuvhura nzvimbo idzi dzese dzinogovaniswa, zvakadaro.
Zvinoita sekuti nyika yeFlorida yakapa vanhu vana mukana. China-
Vange vasiri vanhu vana, vaive varume vana veFlorida. Uye zvino yanga isiri vanhu vana ava. Izvo hazvina kuita kunge kune vakomana vana vakagara vakatenderedza, vakagara pamamirioni makumi maviri mumwe nemumwe uye vese vari kungokanda mukati. Aya aifanira kuve masangano akaungana pamwe nekuisa mari yakawanda uye matarenda akawanda mumugwagwa, nekuti zvikasadaro iwe ' kusaenda kuzokwanisa kukura nekukurumidza.
Zvakanaka, ndinoreva kunyange kugadzirisa izvo, haisi kunyange varume veFlorida. Uye ndizvo izvo vanhu vazhinji muFlorida vanoshungurudzika kwazvo ndezvekuti marezinesi akapihwa kuvarimi muno muFlorida uye pakanga paine zvimwe zvaidikanwa kuti ivo vaive vachiita kiriniki kwemakore makumi matatu. Asi chaipo pavakawana iyo rezinesi vakatengeswa kumaMSO makuru. Saka izvozvi, Florida, kwakawanda kwazvo mvumo dzose dziri kushanda ndedziya dzakanyanya, hombe MSO dzisina kana chekuita. Ivo havasi varume veFlorida, havasi vanhu veFlorida. Ivo havasi kunyange makambani eFlorida. Iwo angori makuru emabhizinesi. Asi munoziva, mukudzivirirwa kwemurimi, vanhu vazhinji vanopa varimi ava hushoma hwekutengesa marezinesi aya. Asi chokwadi chiripo ndechekuti, nekubhanga kuri kunetsa sezvazviri uye nekudyidzana kwakabatana uye kuchidhura kuti ushande, varimi ava, vamwe vacho vanogona kunge vari vapfumi varimi, vanogona kunge vane miriyoni imwe kana mamirioni maviri, ivo vanopa tine mamirioni makumi maviri.
Saka ivo chaizvo havana sarudzo. Ivo havagone kuenda kubhengi kunotora chikwereti. Ivo havana chero sarudzo kunze kwekutengesa kunze kwekuenzanisa. Uye ndizvo zvavakaita. Saka, handifungi kuti imhosva yemurimi. Ini ndinofunga system yese yaive yakanganisa zvishoma. Asi iwe unoziva chii, pakupera kwezuva iri itsva system uye ndinofunga Florida iri kuita basa rakanaka chaizvo. Ini ndinofunga kubatanidzika kwerubatsiro kwakabatsira nenyaya dzakawanda dzakasiyana. Asi ini ndinofunga tiri pane imwe nzvimbo yatinofanira kunyatsochinja kuti ive yakatwasuka.
Zvakanaka, unofunga… Ini ndinoreva here, nekuti kana vakasachinja pamusoro pekurara kana kukupai vakomana mikana yakawanda, vanhu vana ava vachangotarisa varimi vacho vakanaka vobva vatenga. Ndinoreva, kunyanya ivo vachadaro, kana pasina cap, nekuti pano muWashington tine-
Saka chaizvo zvaunenge uchitaura, zvakasiyana muI Illinois kwatinenge tiine maCaps pamusoro pezinesi akabata saka hapana anogona kutonga indasitiri. MuFlorida zvinoita senge, uye zvinoita sekunge muWashington mune chaiyo yakatarisana nedambudziko uko mune vamwe vatambi vakuru vari kuita ruzhinji rwezviri kuitika. Uyezve hazvigoneke kuti upinde mumutambo.
Ehe. Uye kungova pachena, muFlorida hapana kana mumwe mubatanidzwa anogona kuve anopfuura 5% kufarira mune rezinesi rimwe chete. Saka hazvina kuita sekuti iwe unogona… Mumwe mubatanidzwa muFlorida unobva watenga imwe rezinesi. Asi hongu, ndinoreva kuti hapana kapu chaiyo.
Kwete, marezinesi anofanira kuve akapatsanurwa. Saka hapana chikonzero chaicho chekuti vabatane pasi pezenisi rimwe chete. Ndiri kureva kuti rezinesi iine madhora zviuru makumi mashanu zvemadhora. Saka sei iwe uchivabatanidza ivo mune rezinesi imwe kana iwe uine iyo yakawanda kukosha? Saka, ini ndinoreva kuti iwe unoona vamwe vakaita seMedMen, vakangoita rakakura pasi apa. Ndinoziva vaive nehurongwa hwakakura hwema dispensaries avo uye vakasiya huwandu hwakanaka hwevanhu. Uye chaizvo vazhinji vavo, MedMen neSurterra vaitsigira chikumbiro pasi apa kuti vaende kunotandara, uye ivo vanouisa mari huru, uye zviri pachena kuti vaibheja pane zvekuvaraidza kuti vauye kuburikidza-
Chii chiri kuitika neFlorida yekuzvivaraidza pamutemo ye2020?
Zvamazvirokwazvo. Saka paive nemapoka maviri anotonga Florida uyezve kwaive neMILF chikumbiro. Saka tarisa Florida yakatanga chaizvo mambakwedza. Dambudziko ravo raive rekuti havasi kuwana rutsigiro rwevanhu makumi maviri nevairi, saka ivo vaive vasina mari yekuwana masiginecha. Unoda anopfuura 22 masaina kuti uwane icho pavhoti pano muFlorida. Uye ivo vakakwira kudarika anopfuura zana ezviuru, yakasvika kuDare repamusoro rekutarisirwa, izvo zvaifadza kuti ivo vakakwanisa kusvika pacho. Asi ipapo MILF yakauya muchikepe uye ivo vakapihwa mari neMedMen neSurterra uye vanhu vazhinji vakagumbuka neimwe mitauro muchikumbiro ichocho. Ndakagumbuka nekuti ini ndoda kuti vese vashande pamwechete. Zvinoshungurudza kwazvo kuti tiri kurwa pamwe chete kana isu tese taidai takauya pamwechete.
Saka ikozvino wave neRegates Florida iyo ine zviuru zana. Iwe une MILFS iyo ine mazana maviri ezviuru masiginecha. Iyo Nguva yakanga ichiita tiki, zvakapfuura vaifanira kuve neimwe mari naFebruary, ivo vaisazozvirova. Saka vakapfugama. Saka zvinosiririsa, ivo vaive nemukana wekuungana pamwe uye ndinofunga dai vakaungana tinogona kunge takazviona zviri pamutemo. Nyaya hombe inyaya yekukura. Ini ndoziva iwe uchangotaura pakutanga kwechiratidziro chekuti urikuda kurwa pagroup repamba. Chikumbiro cheMILF chaive chisina kana chinhu imomo chine chekuita nekukura kwemusha, kugadzirisa Florida.
Zvino iwe unoti uyu MILF chikumbiro, hauna kuburitsa chikumbiro cheMILF? Nekuti ini ndiri kunzwa MILF uye ndakafanana, "Ini ndinofunga izvi zvinofanirwa kunge zviine mamwe masiginecha, kunyanya muFlorida." Zvinomirirei?
MLF Marijuana Pamutemo Florida
Unoziva chii, ndinochitumidza kuti MILF chikumbiro. Mubvunzo wakanaka.
Zviri pamutemo mbanje muFlorida. [crosstalk 00:15:50] Asi chokwadi chekuti iwe wakati MILF, iyo yaifanirwa kunge iri freaking yavo, vaifanirwa kunge vakatengesa mumashure meizvozvo, nekuti [crosstalk 00:15:59] -
Uye iwe unazvo, wakazvireva nezvazvo. Ehe, asi izvo ndezve imwe nyaya pane iwe kana, "Zvakanaka, saka iwe une maviri aya kukwikwidza [inaudible 00:16:08] chirongwa uye iwe unongoita, waita basa rako zvakapetwa kaviri. Uye zvekare zvakare, kumusha kwakakura kwaizopihwa varwere vekurapa uye kana mumwe wavo? Kana kuti yaive nyaya yei yekukura kwemba yakatsanangurwa kubva kune imwe?
Saka chaiye Regedza Florida yaive huswa hwekufamba kwemunhu wega wega izvo chaizvo, chaiye anongoda mbanje pamutemo. Mufambiro weMILF wakanyatsotsigirwa neMedMen neSurterra uye kwaive kubatsira kwavo kusabatanidza chero chinhu chine chekuita nekukura kwemusha. Ehe vanopokana kuti ivo vaive vakanyarara nerukudzo rwekukura kumusha uye vanozozvisiyira kune wedare remutemo uye ivo vaive nezvikonzero zvavo zvekubva pamba vachikura kubva mazviri. Vati zvichavhiringidza bumbiro remutemo uye kuitira kuti paitwe sarudzo yebumbiro raunoda kuti riite nyore uye ivo vaishuvira kurichengeta, sekukumbira kweMILF kwaive nyore, kupfupi. Tonga Florida chikumbiro chaive chakareba zvakanyanya nehukuru hwakanyanya hune ruzivo mazviri, saka-
Mubvunzo wandaive nawo pamusoro peFlorida uye zvakare Washington State yakafanana nayo uye [inaudible 00:17:11] haina. Ini ndinofunga iri mbiri chikamu mubvunzo. Kutanga, iyo imba yemutemo muFlorida inogona chaizvo kuita kwavo pamwe chete voisa pamwe mutemo? Nekuti kana iwe uchitaura nezve chirongwa chekuvhota, ichi chichava chikamu chechipiri. Iwe unoisa izvo zvinofanirwa kugadzirisa bumbiro pane izvo uye zvinowanzo pfupika. Ndiani anodudzira izvo, uye oita mitemo kuitira kuti inyatsove iri mutemo rubrici sezvatina kana kuda necannabis seindasitiri?
Ehe. Saka parizvino isu chaiye Senator Jeff Brandes akaisa Seneti bhiri 1860 iri yekushandiswa kwevanhu vakuru, chaiko mune yekupedzisira mutemo musangano mumiriri Michael Grieco, akaisa kunze bhiri rekunakidzwa zvakare. Aizviziva kuti hazvina kudaro, ndiri shamwari naMichael, akandiudza kuti hazvidi kupfura. Asi aida kutumira meseji, "Hei, ichi chinhu chatinoda kuve nacho sechikamu chehurukuro gore rakapera." Saka gore rino Jeff Brandes akaisa iyi bumbiro 1860. Iyo yakanaka bhiri. Ndinozvitsigira. Izvo zvine, ndinoziva takataura zvakawanda pamusoro pemagariro ezvekuenzaniswa kwehutano hweI Illinois mutemo. Iyo ine chikamu, inobvumira kukurumidza kwezvinhu zvematsotsi. Saka kune imwe nhanho kune chimwe chikamu chemagariro chevanhu
Asi hazvipe chero mapoinzi ekuti vanyoreri vasungwe cannabis kana chero chinhu.
Ndizvozvo, hongu. Ini ndinoreva kunze muI Illinois, sekuziva kwamunoita, iwe unowana makumi maviri muzana ematanho kana iwe uchinyorera kune mumwe munhu ane umene uye kutonga kwechinhu icho. Uye saka ihwo huwandu hukuru hwemakona. Saka chero munhu asiri kunyorera nemagariro vanhu zvakaenzana, havana mukana. Saka ivo havana kugovera chero mapoinzi chero. Ehe saizvozvo-
Unosungirwa kutamba, imo yemakwikwi einikwikwidzi.
Ehe, uye chokwadi chiripo ndechekuti nemugavhuna wedu wecervative izvozvi, pane mukana mudiki kwazvo wekuti unogona kupfuura neyemutemo. Izvo zvinonyanya kuitika kuburikidza nekugadziriswa kwebumbiro. Asi iwe unoziva chii, mumaindasitiri ino, haumboziva. Saka iwe unoziva, ndine tariro. Ndiri pachena kuti ndiri kutarisisa mafambiro pane bhiri iri. Vari muchikamu izvozvi uye saka vari kusangana uye vari kutaura nezvazvo.
Zvichida hazvingazoperi mune chimiro icho chiri ikozvino. Zvichangoenda kuburikidza nekudzokorora kwakati wandei kusvika pamwero wokuita kwayo kunze uye kunogamuchirwa. Asi iwo wakakura mukana. Uye chii chinonyanya kufadza nezvacho zvakare zvakare, chinhu hombe muFlorida ndiko kusangana kubatana. Ivo havatenderwi kubvumidza chero chinhu. Saka kubva pakukura, pakugadzira, kugovera, ivo havakwanisi kunyatsoita chero masevhisi aya.
Iyo Seneti bhiri 1860 inovabvumidza zvakajeka kuti vabvumire kunze kwevamwe veiyo. Saka zvazvinoreva izvo ndezvekuti kuchave nevapi vabatsiri vebasa vanokwanisa kuuya kuzopindirana nemakambani ane marezinesi aya. Saka vanhu vazhinji vanofanirwa kunzwisisa kuti kusvika pavanoda kuita zvekufambisa, pachave nemikana yemakambani ekupaka ayo ari nyanzvi mukufambisa kwe cannabis uye izvo parizvino hazviwanikwe pano muFlorida izvozvi.
Iwe wataura iwe uri wezvematongerwo enyika anochengetedza, uye kana ini ndichifunga Florida, ndinofunga vanhu vakuru uye Conservatism uye mari yese iripo. Ini ndaimbogara muJersey, saka ini ndojairana neiwo mafungiro ehuwandu uye chii. Iwe unofunga sewe mugari weti uye kuva mumwe munhu anoona zvematongerwo enyika yako, pane yakawanda yekusimuka kubva kuBig Pharma? Ndinoreva kuti, sei vanhu vazhinji vasiri kusvika kune yako yekare yekuvhota, nekuti munhu anochengetedza, ndinoreva, tinoita mbanje kuti isvinuke. Haisi, yakafanana nemafuta. Zviri nani pane doro. Zvakafanana nekupedzisira kana tasvika kune iyo yekunyoreswa iyo isu tese tinoda, zvichave, iwe unogona kuitenga sa broccoli, handiti? Kunge pondo yemakumi mashanu emasenti, nekuti vanhu vazhinji vari kukura.
Ngatitorei kudhirowa mutsetse pavodka, kunge [inaudible 00:21:09] makadhi. Ichava indasitiri inodhura zvakare zvakare. Asi iwe unogona kupinda mazviri.
Zvakanaka tarisa, kana ukatarisa pamubatanidzwa, uchaona kuti mapato ese ari kutanga kuungana panhau iyi. Uye ndinofunga kuti uri kutanga kuona izvo muFlorida, uye urikuona izvo mukati menzvimbo dzakasiyana dzakasiyana. Saka ini ndinofunga nhoroondo, zviri pachena kuti ndidzo dzinochengetedzeka dzave… Uye tarisa, ini handina kana chinhu chinopesana nevanochengetedza. Ini Chaizvoizvo, ini ndinozvichengetedza ini, ndinovhota pane zviri kutaurwa. Asi pane iyi nyaya, vakaneta kwazvo, asi vazhinji vavo vakachinja. Ndataura kune akawanda emutemo ekuchengetedza iwo achinja, uye ivo vatendi. Vakataura nevamwe vekare huwandu hwenyika hwatinahwo muFlorida. Ivo vakanzwisisa iwo marapiro ekurapa. Vamwe vanachiremba vandinoshanda navo vakaita chaizvo kuti manzwi avo anzwikwe muTallahassee kunzvimbo yedu yeCapitol,
Iwe unofunga here meseji ya… Ndine urombo, ndeipi yaunofunga inowedzerawo nevanhu veFlorida nezvemitemo yembanje? Iyo meseji pamusoro pekuti yakanaka sei, inoshanda mushonga, kana meseji yekuti iri bhizinesi rakanaka. Nekuti kana ini ndichifunga Florida, ndinofunga vanochengetedza, asi ini ndinofunga, "Ehe, asi ivo bhizinesi rinochengeta. Ivo vane hanya nezvavari kuita. Ivo vane hanya nehuwandu hwavo. ”
Zvakanaka ndosaka chero mese mese message yauri kuedza kuburitsa, tarisa, kuchikoro chemutemo unogara uchidzidziswa iwe unofanirwa kuziva kuti vateereri vako ndiani. Uye ndicho chinhu chimwe chete chandinoziva… ndinogara ndichiziva kuti vateereri vangu ndiani. Iwe unofanirwa kuziva kana iwe uchitaura kune nyoreton versa munhu akadzidza, mumwe munhu anonzwisisa zvemari, mumwe munhu asinganzwisise zvemari. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti unotaura naani. Uye hongu, zvinhu zvinoenderana nevanhu vanochengetedza ndezvekuti ichi chiri kuita mari chinhu. Pane mukana wakawanda pano. Mazhinji emadhora emadhora atingave tichiwana, hongu hatidi kukanganisa izvo zvakagadzirwa neCalifornia uye dzimwe dzedzimwe nyika nekubhadhara zvakanyanya.
Asi pane yakawanda yemabhizinesi mikana ini ndinofunga inogadzikana nemapoka ezvekuchengetedza zvishoma. Asi zvinokoshawo kutaura nezve hurema. Uye kumwe kudenha kumusoro kuno kwakawanda kweaya mataundi anonyatso kurambidza mawendendi ayo anotenderwa mune yedu nyika mutemo. Saka ndakaita basa rakawanda padanho renzvimbo zvakare, ndichidzidzisa vamwe vakuru vepo nezve chikonzero nei vasingafanire kunge vachirambidza. Uye zviri pachena kuti zvakawanda zvacho zvinovakirwa pane kusarwa. Iko kungodzidzisa veruzhinji uye kuedza ku-
Marijuana uye iyo NIMBY mhedzisiro, iyo isiri mumashure mangu kumashure.
Asi ngatidzidzise vanhu parizvino uye ini ndiri ruzhinji, nekuti ini ndinobva kuIllinois uko kwatisingabvumirwe kuita chirongwa chekuvhota kuti tivandudze bumbiro redu. Iwe unotora sei iyo diki, diki diki diki yekugadzirisa ivo yavanoisa mukati imomo uye vanogadzira iyo yose yemutemo chitima machira kusanganisira mutemo wekutonga kuitira kuti iwe unogona kupa rezinesi nekutarisa iyo cannabis indasitiri? Kana iyo indasitiri yemanje muFlorida?
Zvakanaka zvese zvinotanga nechikumbiro, saka unofanirwa kunyora chikumbiro, uye sezvandataura, chikumbiro cheRegates Florida chakareba. Uye chaizvo kana iwe uchinge wapfuura nepazviri, ndinofunga unoda kupfuura makumi mapfumbamwe emazana masiginecha. Dare Repamusoro rino voita ongororo yemari uye ivo vanoongorora mutauro, uye mutauro wekugadziriswa kwebumbiro unofanirwa kuve pachena zvakajeka uye inofanirwa kuve imwe musoro wakafukidzwa. Iwe haufanire kuvhara misoro yakawanda. Saka iwe unoziva, kana iwe uchinge wapfuura iyo Supreme Court wongororo, iwe ukawana masiginecha anowana pavhoti, unofanirwa kuwana saina makumi matanhatu nemazana matanhatu ezviuru kana chimwe chakadai.
Zvino zvobva zvatanga pamhota, unofanirwa kuvhota. Ipapo maparamende anofanirwa kupinda mukati uye vanosvika [inaudible 00: 24] mutemo unowirirana nebumbiro iro. Uye ndizvo chaizvo zviri muFlorida Dare Repamusoro nyaya ndeye kuti iyo mudareta yaakapinda mairi. Uye zviri pachena kuti Florida Bumbiro iri Hukuru pamusoro peFlorida Statute. Uye kana paine kupokana pakati peFlorida Statute neFlorida Bumbiro, pane nyaya uye kuti mutemo unofanirwa kunzi hauna kupokana. Uye ndiwo mamiriro atiri izvozvi.
Izvo zvinoita, uye yave iri nguva yakareba kubvira ndanga ndiri pamhenderekedzo yeEast. Kuputsa kwechirimo kuchiri chinhu here pane murume ipapo? Kunge Daytona nezvose izvi zvinoramba chiri chinhu?
Zvamazvirokwazvo. Ini ndinogara muFort Lauderdale beach saka hongu, huyai munaKurume nguva, zvinopenga apa. Ndiri kuedza kugara kure nemahombekombe nguva iyoyo.
Saka maona, iyo nharo inofanira kuitirwa pano munguva ino, handizvo? Nekuti ini ndinorangarira, uye ndinoreva kuti mhuka yemusango inoitika.
Shit. Uye iyo inosimudzirwa nekwaJimmy Buffett's ane Sunterra kana Surterra, ndeimwe yemakambani ayo ... Naizvozvo Buffett ine chimwe chiitiko mumusika weFlorida cannabis.
Ehe, Surterra inobatanidzwa, uye ini ndichakuudza iwe, nemahombekombe, imwe yeDeerfield, ndakataura kuDeerfield kunzwa pavakanga vachitsvaga kurambidza mbanje maresheni uye chakanyatso kubata pfungwa yavo apo MedMen yakatenga nzvimbo iri pamhenderekedzo. . Uye MedMen, ivo vanovaraidza, kutarisa kwavo, kana iwe uchivatarisa kubva kune kushambadzira-
Ehe, ndidzo nhandare yekutengesa zvivakwa cannabis, uye saka vaifunga, "Ah, makore mashanu kubva zvino tese tichava nemipururu, tichave tichiteerera kune reggae, zvichave zvakanaka.
Pamhenderekedzo yegungwa, kutonhora muDerfield Beach. Uye zvakatyisidzira crap kunze kwevanhu veDeerfield. Uye ivo vakapedzisira vaita kuita kurambidzwa mushure mechokwadi. Saka MedMen yakabva yawana nzvimbo yavo, asi ivo vakarambidza iyo. Uye ini ndinonyatsofunga kuti sarudzo iyi yaive chaizvo inopesana pane izvo zvavanobvumirwa kuita pasi peFlorida Statute. Chirevo cheFlorida hachivatenderi kuisa ... Kana vakatendera mbanje mawedzeri, havakwanise kuisa cap. Uye chandinotenda chakaitika kana mukarava maminetsi edzidziso iyoyo muDhierfield chikamu, uye izvi zvichiitika kune vese matarenda akasiyana, chokwadi hwaro hwekuda kurambidza mabhandendi ndewekuti vaifunga kuti vatove nazvo zvakakwana.
Saka kana mutemo usingakubvumidze kuti uise kapu kumberi kumagumo emahara, nei uchibvumidzwa kubvumira mamwe makanzuru uye wozoti, "Zvakanaka, isu tine zvakakwana, ikozvino tichazvirambidza." . ” Chaizvoizvo ndeye chinhu pamusoro pechimiro. Substantively ivo vari kuita zvimwechete izvo. Saka kana MMTC yaida kurwisa kurambidzwa ikoko, ndinofunga kuti vanga vaine nyaya yakanaka.
Izvo zvinongoita sezvakapenga kwandiri muFlorida nzvimbo dzese kuti aya vezvematongerwo enyika vanodzivirira mbanje pamhenderekedzo. Imwe neimwe yakaipa nzira ini ndinorangarira ndichikura zvakaitika muFlorida kana Atlanta kana zvese zvakaipa shit, panguva dzekisimusi mhemberero pazhinjisa yekuzorora nguva doro rakapedzerwa. Waifanira here kuve neyakaipa yakawanda yaitika mudhorobha rako rinobata nedoro usati, "Zvakanaka, tipeiwo huswa hwakaipa"
Phish paakaita Big Cypress kurira mugore idzva, ini ndisingareve sekudaro, "Ah mwari wangu, kune kongiresi yechiPishi inotora maawa manomwe pamhenderekedzo, nzira yekuenda kunodzidzira muFlorida." Kwete, ndinoreva, asi izvo zvinonyadzisa murume chaiye. Uye chisarudzo ichi chinopararira. Uyezve kana ndipo panogarwa vanhu kuenda pamudyandigere, zvakare zvinoenderana nezera. Saka ndinoreva kuti zvinogona
Asi ndinoreva, unoona zvaitika.
Uye zvakadaro ne yake yeSilva Tuna Tour, ari kunze uko achiyedza kuenda kumidzi kundoputsa chisaradzo ichi, asi-
Asi iwe unoona izvo-
Uye kunyangwe iyo mhata inotakura pamusoro. Ndiri kutanga kusanyanya kuregera musoro, asi ndiri kutanga kubatikana zvakanyanya neiyo psilocybin howa yekufambisa uye ini ndanyatso kuburitsa yangu yekusa-purofiti vhiki rapfuura. Isu tichauya ne webhusaiti yedu munaFebruary, asi yedu-is-for-profit inotarisana nekushandisa research yezveutano uye yemweya kutyaira zvine chekuita nekugadziriswa kwepamutemo kweiyo psilocybin howa muFlorida. Uye tatoita yakakosha kamuri ipapo. Asi dambudziko zvakare zvekare inyonganiso.
Chinhu chimwe chete ichocho mune cannabis, iwe unofanirwa kukunda kusemeswa uye iwe wakazvitaura iwe pachako, doro, une vanhu vanonwa zvakanyanya uye vanofa nedoro-
[inaudible 00:28:52] zviuru gore rino.
… Hapana munhu ari kufa nekuputa cannabis uye hapana ari kufa nekutora musviniro wecyilocybin. Ikozvino vanogona kuita imwe sarudzo yakaipa uye ini ndinofunga ndosaka ndiri kutaura kuti tinoda kuve negwara repamutemo kugadzirisa. Vanhu vazhinji vari kuitora pasi peimwe marongero pamwe. Saka vanhu vafamba pamberi pemotokari uye dzakawanda-
psilocybin mushwa & pamutemo weMarijuana
Right, asi nekuti iine hallucinate gin, asi inoita kunge ine zvokurapa zvinhu. Nekudaro, uye ini handina kukweretwa pamusoro pazvo, uye tisati tatendeutsa maitiro edu kudzokera kuFlorida mbanje mitemo, chaizvo muchidimbu, chii chinonzi psilocybin chakarongwa pasi peMutemo wakadzorwa Zvinhu?
Psilocybin anga aine nhoroondo refu mutsika medu. Uye chinonakidza ndechekuti chinodzokera, unotarisa madzinza, iwo madzinza makuru iwo achiri kuzviita uye mamwe acho anotenderwa kutora zvinhu saAyahuasca Burner nekuda kwezvekunamata uye zvinhu zvakadaro. Asi kutsvagurudza kwaitwa. Uye chaizvo maitiro andakapinda mazviri, izvo zvandinofunga kuti zvinonakidza ndezvekuti, kwete vese vatengi vangu, asi huwandu hwakawanda hwevatengi ve cannabis vaifarira kuwana psilocybin uye vaifarira kuisa capital, kukwidza capital uye kutanga. kuita zvimwe zvinhu, kungave kuri kuJamaica. Denver akangozvidzikisira. Oakland yakaiswa pamutemo, chaizvo Chicago yakamisikidzwa. Vermont ine bhiri. Oregon ane chikumbiro chebumbiro.
Uye saka ndanga ndichiwana izvo zvibvunzo. Uye zvechokwadi chokwadi ini ndakanga ndisingafarire, nekuti ndakafunga kuti yaive mhando yekuseka. Ini pachangu ndakanga ndisina kutora psychedelics. Saka ini ndakanyatsotaura kune vamwe vanachiremba vangu vandinomiririra uye ndakataura nezve vanachiremba vanomwe kusvika gumi, uye maoko pasi, mumwe nemumwe wavo aive mahombe vatendi mukukosha kwekurapa. Saka ipapo ndakatanga kuita yangu yekutsvagurudza ndikatanga kutaura nevamwe veairima uye neanorapa kunze kuJamaica. Kutaura kune varapi vepfungwa varapi pasi apa vari kushandisa ketamine, mamwe angu ekurapa ekurapa marapi ari kushandisa ketamine. Uye ndinotenda zvakanyanya mukukosha kwekurapa ikozvino kweaililocybin howa kupfuura zvandinoita zve cannabis. Hufakazi hwavainahwo hwakakura. Uye kunyange iyo FDA iri kutanga kusvika shure kwayo. Saka zviri chaizvo kubva kune FDA maonero inogamuchirwa kupfuura iyo cannabis iri.
Asi iwe urikutaura nezve micro dosing, kunyangwe kunge uine shrooms. Ini ndinoziva mukomana pano, anovaisa mumapapu uye ini ndinoreva, ndinorangarira semwana, ndiri murume wepakoreji, unogona kutora vaviri, ndakazviita zvekunakidzwa. Seizvi zvichave husiku hwakanaka, nekuti ini ndakatora yakawanda. Uye zvinobatsira pakurapa. Ndinoreva, iwe uri kutaura naturopathic zvinhu. Zvese zvinogona kutibatsira, handizvo? Kunyangwe tumeric uye zvese izvi zvimwe zvinhu, zvese-
Zvakanaka, chinhu chimwe chete chandinofunga chakakosha. Chero ini pandinokurukura chero rwendo rweupi nani pane psilocybin mushwa, ivo vese vanotaura sekunge nhetembo sezvaunoziva, ivo vakagovana chidimbu cheganda ravo kana ivo vese vaine izvi humwe ne [inaudible 00:31:49]. Kana iwe uchifunga nezve zvinhu zvitatu zvakakosha zvavari kutsvaga kurapa ne-psilocybin howa kushungurudzika, PTSD uye kupindwa muropa. Uye kana iwe uchinyatsofunga nezve izvo zvese zvitatu zvezvinhu izvo, pane chimwe chinhu chiri kuitika mupfungwa, pane zvimwe zvabuda. Chinhu hachingori ipapo. Uye zvinoitwa ne-psilocybin howa howa, zvinokubvumidza iwe kuti ungo durura izvo uye kuvhura pfungwa dzako kumusoro uye kuwana zvakawandisa maonero uye kunyatsogadzirisa pfungwa dzako. Uye ndizvo zvavari kuita kunze kuJamaica. Kune nzvimbo dzakawanda dzekurapa kunze uko dzaunoenda uye unoita mazuva manomwe ekutsiva uye zvichingodaro uye nezvimwe [crosstalk 00:32:23] -
Ndinoziva zvandiri kuita mushure mekunge mwaka wedu wekushandira wapera pano munaKurume-
Asi iwe unoziva, zvinogamuchirika kutora piritsi iyo fucking inoita kuti usununguke senge Xanax uye chii chisingapikisane nepiritsi, mhando yeiyi scrine yehowa-
Kana imwe inonzi SSRI, yakanaka iyoyo, asi kuti ini ndinofunga kunyoreswa kwecannabis muFlorida, Illinois, Seattle. Uyezve zvinotaridzika sokuraswa kana kushandurwa kwemutemo we psilocybin zvine hukama mune pfungwa yekuti nzira dzataishandisa muCentral century yekugadzirisa zvinodhaka izvi zvaingova zveupenzi uye zvisirizvo. Uye zvakatirwadzisa isu senharaunda nekuti zvakagadzira kuwedzera kusagadzikana kazhinji, hupenyu hwakamanikidza kurarama. Uye ivo vaizosimudzira izvozvo. Ndinoreva kuti, unorangarira kumashure kuma20s pavaive neFlintstones vachiputa fodya paterevhizheni, vachishambadzira chaizvo kuvana. Uye ikozvino ndiwe unofanirwa kurwisa chiseko chakagadzirwa nezana iro gore kuti ufambire mberi uye uite, “Kwete, tarisa uku kuongorora kwachiremba. Nei tisiri kuita izvi? ”
Uye chii chinonyanya kufadza, ndanga ndichitaura kune magweta munyika yese iri kutungamira kufamba uku. Guys saNowa Potter uyo, iye aripo pa Psychedelic Law Blog kubva kuma90s, ndinoreva kuti uyu mukomana anounza huwandu hwakawanda hweruzivo nezve psychedelics uye pamutemo masisitimu uye zvinhu zvakadaro. Asi chinonakidza ndechekuedza kufunga kuti chii chinotarisirwa, uye ini ndinonyatsoshandisa izwi rinotungamira, rine hutongi hwemitemo hunogona kuve. Izvo hazvingave zvakafanana ne cannabis, uye pane chikoro chekufunga nevazhinji vevamiririri kuti havatendi kuti chinofanirwa kuve chekurapa. Nekuti kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchirwisa marapirwo, uye ndataura naNoa Potter nezve izvi nekureba uye ane bhurogu yakakura maererano nenyaya iyi.
Asi paunotaura nezvekurapa, zvinoita kunge uine chimiro chakakodzera, saka unobvumidzwa kuzviita mune zvekurapa. Kana kana iwe usina mamiriro ekukodzera, uri tsotsi uye semhosva iwe haubvumidzwe kuzviita. Uye manzwiro aNoa uye mazhinji eamwe magweta andakataura nawo ndeekuti kune kukosha kwakawanda kupfuura kwokurapa kune psilocybin howa, sekunamata. Ndicho chikonzero nei kusiri-kwangu kuri kushandisa kurapa pamwe nekutsvagisa kwemweya kutyaira zvine mutsindo pamutemo.
Izvo zvaigara zvichindishungurudza pamusoro pekufamba kwe cannabis ndechekuti ivo vaizogara vachiisa kibosh pane Yekutanga Amendment rights. Kana mumwe munhu akati, "Kwete, ndinotenda mune zvekunamata nekuda kwezvikonzero zvemweya uye ndiyo kodzero yangu kuita chitendero changu maitiro andinoita." Ivo vachiri kuti, "Nah."
Uye mune zvese cannabis uye mushwa, inyaya yehutano. Nekuti ndinoreva, vanhu vanoishandisa zvisina kunaka asi panguva imwe chete vanhu vanogona kutora yakawanda uye hupenyu hwayo huri nani pazviri. Isu takapara mhosva, America iri kurwadziwa nezvandaizoda kufunga zvakaita seMuparidzi weVasikana veChirwere, handizvo? Iwe wamuita kuti anyatsomuchengetedza uye unomuchengeta mukamuri kadiki kwese hupenyu hwako uye izvozvi, "Ah shit, tese takabatikana nekuti ndakanganwa kukudzidzisa maitiro." Kofi idoro, iyo caffeine muhupenyu hwedu hwezuva nezuva-
Handizvo here zvaiwanzoitika, uye zvakare, chikonzero nei ndisina kumbobvira ndapinda muhowa, nekuti ndakaita kamwe uye ivo vakandipa shitini nemapipi panguva imwe chete. Inotyisa nzira yekutanga. Asi iwe unoziva, ... zvinoitika. Uye saka, uyezve zvakare, zvakandiwanira mhando dzinonwisa mabhora, kwete kuzosvika padanho iro, asi yaive nguva yekudyara zvakare. Kubva pane zvandakatarisa mariri, havana ivo senge shaman iyo inofanirwa kuve gwara remhando yacho ...
Uye ini ndichakuudza, kune vakomana kunze kuno kuMiami vachizviita. Ndataura navo kuti ivo inyaya dzekupenga pasi pano dzinotungamira vanhu kuburikidza idzi nzendo dzekunamata. Kune mamwe mapoka pasi pano ayo anogadzira zvivako zvekununura kunze kuJamaica uko kuri pamutemo zvizere. Saka, zviri chaizvo, izvo zvavanotaura zvakawanda pamusoro pazvo ndeyako kuisa uye kuronga kwako. Iwe unofanirwa kuve neshuwa kana vakati set, iwe une chinangwa chakanyatsojeka kuti upinde mairi, uye iwe unofanirwa kunge uine kurongeka kwakanaka.
Nekuti manzwiro ako anokwezverwa munzira imwe kana imwe. Saka kana iwe uri munzvimbo inotyisa yekutenderedza vanhu iwe yausingavimbi uye iwe wausingade, uchave nerwendo rwakaipa. Uye zvinopesana. Kana iwe uri mune yakaisvonaka mamiriro apo iwe uri pakati pevanhu vaunofarira uye vane hanya newe uye vari kukutarisira. Uye iro ibasa raShaman, nderekutungamira iwe parwendo.
Uye ndinovenga izvi. Zvinosekesa kuti ndinonzwa senge, makore maviri apfuura ndingadai ndisina kumbotaura seizvi. Chokwadi hapana hippie kana chero chinhu chakadai. Asi iwe unoziva-
Kuzadzikiswa kwekunyonganiswa kweMarijuana paFlorida Cannabis Laws
Kwete, izvi ingori zvokwadi. Honestly the hippies are [inaudible 00:36:48] nguva yose.
Asi ichocho hachisi chokwadi, nekuti izvozvi urikusangana nemhirizhonga yatiri kurwisa munguva chaiyo. Nekuti ini handingafunge izvi makore maviri apfuura uye vanhu varikutaura kuti, "Tarisai, mhetamakumbo yakaiswa pandiri uye zvino ini ndazvipfuura. Ndipo pandakazoona kuti yaingove handshit. " Asi [crosstalk 00:37:05] yemabasa ayo zvinonyadzisa anoshanda murume.
Nemishonga, iwe uchadaidza zveMweya, zvingave ne cannabis kana mushwa. Zvakare psychology, handizvo? ZveMweya, zvepfungwa. Kufunga kwedu kwakanaka. Isu tinotaura nezvehutano hwepfungwa, uye ndizvo zvekunamata zvakare. Zvakafanana kana uine hutano hwepfungwa chaihwo uye maitiro auri kuita, "Iwe unoziva chii, kunyangwe uri kuendesa kune PTSD kana muviri, kurwadziwa chaiko, uchiri kugona kushanda semunhu munhu." Uye vanhu vanorarama vasina kuziva izvozvo. Ivo vanorarama vasina iwo ekunzwa kunaka. Nekuti ivo vanotya kuitora nekuti hazvisi pamutemo.
Ndicho chikonzero ini ndichifunga, ndezve kuve nekuzvidira. Ini ndinofunga isu tinofanirwa kuve nebasa sevanhu. Isu tinofanirwa kuve nehanya nemitemo yedu uye tinofanirwa kuzvidavirira pachedu. Uye iwe unoziva, kana iwe ukatora zvinodhaka zvisina hanya kana iwe uine isingateereri mirau uye iwe unongopara mhosva pasina mirairo, ini handisi weizvozvo.
Saka zvakakosha kuti tive neiyi hurukuro. Isu tinoita tsvagurudzo yatinofanirwa kunge tichiita, uye tine nhaurirano dzinovaka dzatingagone… Ndichavimbika, handizive pachangu kuti mutemo wepamutemo unofanirwa kunge uri chii. Ndicho chikonzero nei kusiri-kwe-purofiti, ini ndisiri kuenda ndakananga kuhusungwa izvozvi. Zvandiri kuedza kuita kusimudzira ziviso, kwete zveruzhinji chete, kwandiri. Nekuti ini ndoda kuona yakanakira pamutemo hurongwa uye kune dzimwe nzvimbo dzakadai, tarisa Kevin kunze muDenver, ndakataura naye. Akaita basa rakakura kutungamira decriminalized Denver, akataura nevarume kunze muOakland. Ndataura nevanhu chaizvo munyika yese uye vaita basa rakakura.
Asi izvozvi ini chaiye, handisi kunzwa zvakanaka nezvekuisa mimwe mitemo kudzamara ndanyatso kusimudza ruzivo rwangu uye kuti ndizvo zvandiri kuedza kuita kuunza ruzivo pakati pevaFloridi pakati penyika, pakati penyika neni uye kuitira kuti tigone kuuya kumhinduro chaiyo pano maererano nemirairo yayo.
Zvakanaka, zvinonetsa. Isu tinosimudzira senge chirimwa kana chimwe chinhu uyezve zvinoita sekungoti, “Hei vana, endererai kuputa imwe sora, asi ini handidi kuve nemhosva kune chero munhu upi zvake vana vanotiza kusvika pese pese, ini handina kuda vaudze vaputi sora. Ndinoziva kuti hazvikuvadze, ini chaizvo handipe fuck. Zvakafanana naizvo… Asi-
Ndiri chinhu chinonyatso kuve neane makore ari pasi. Ini ndinofunga dai ndaizotora iyi mishonga ndiri mudiki, ndinofunga ini, huropi hwako handifunge kuti hwakagadzirwa zvakakwana. Asi somunhu mukuru munhu, kana iwe uri kutora iyi mishonga uine imwe chinangwa, ingave MDMA, kune hwakawanda humbowo MDMA inobatsira nePTSD, psilocybin howa, aya ese mapato mukati me psychedelics. Uye kana iwe uri mukuru uye ukavatora uine chinangwa chakaringana uye nekunzwisisa kwakaringana, ndinotenda zvechokwadi kuti vangave vari vekurapa. Asi kana zvinodhaka izvi zvikashungurudzwa, zvinokwanisawo kukuvadza zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti isu tingoite hurukuro.
Ndozvakaita sei nemitemo ye cannabis muFlorida kana mune chero mamiriro, iwe uri kubvunza vanhu kuti vatore chikonzero, ruzivo pachedu, kutendeseka maonero enyaya yakaoma kunzwisisa iyo yavanonzwa neimwe nzira pane. Zviri nyore kwazvo kuti mumwe munhu angoti, “Kwete, ini handizvitsigire. Hapana chandinoda. ” Nekuti ipapo ivo havafanirwe kugadzira chimwe chinhu chinozoita kuti vanzwe sekunge vanofanirwa kubvunza chero chinhu, kana kuti vanofanirwa kuchinja chinhu chisina kumbobvira chavapo.
Saka iwe unowana iyi mitsva mimwe cannabis mitemo muFlorida uko iwe unofanirwa kuve uine iyo iyo madhora emakumi mashanu emamiriyoni kana muI Illinois uko kune zviuru zvina makumi mana zvemadhora. Saka iwe unoziva kuti vanhu vari kuenda kunomhan'ara nyika yeIllinois uye edza kugadzirisa kuti vatore rezinesi. Uye zvirinani kuti kurwadziwa kuri kukura uko kuripo isu kuri kushanda kuburikidza nenzira iyi yekuita chokwadi chekuti isu tine mutemo wekuchinja. Asi ndinoreva, zvinosemesa zvakadaro kuti zviri nyore. Chinhu chakareruka ndechekuti, "Kwete, vasunga vese."
Uye ndizvo chaizvo, izvo zvakaita seizvo maiguru vari kuita muno muFlorida. Ivo vane kodzero pasi pechirevo chedu chekurambidza ma dispensaries. Saka vazhinji vava kuti, "Hatidi kuuya neizvo mutemo wezvemitemo unofanirwa kunge uri mumutemo wedu." Zviri nyore kwatiri kuti tiwane liner imwe inoti, 'Vakarambidzwa kuenda kuFlorida Chirevo 381.986.' ”Boom, tapedza. Hatifanirwe kunetseka nazvo. Rega mamwe materu azvione. Vachave maLabhoratri ekuedza. Kana vangoita izvo zvavanoita, ipapo tobva tafunga, nekudzokorora. Izvo chaizvo izvo zviri kuitika ikozvino ndezvekuti iwo mamwe madhorobha akangoita senge federalism inobvumidza nyika kuve maLabhoratri eedzo.
Saka zvakanaka. Tinogona ikozvino kutaura nezve States Act. Ini ndinofunga zvinotyora Chikumi 14. Iwe unofungei nezve State States?
Zvakanaka, ndinoreva, iyo State Act ine yakawanda yakanaka mutauro mariri, ine yakawanda yakaipa mutauro mariri. Ini ndinoda kuti nhaurirano iri kuenda kumberi pane imwe mhando yehurumende yemubatanidzwa inoremekedza mutemo wenyika kusvika padanho. Uye chaizvo izvo vanhu vasinganzwisisi nezveHurumende's Act, zviri kunyatsobatanidza hurumende yemubatanidzwa kunyanya kubvumidza kuti maNyika mave ma laboratori ekuedza. Ndiri kushuvira kunzwa kuti ongororo yako ndeyei kusvika kune chikonzero nei-
Nekuti ipapo inotora mutemo wemubatanidzwa uye inoita plugs mumitemo yenyika. Saka ikozvino iwe uri kurapa vanhu vemubatanidzwa pasi pekasiyana nyika rubric uye zvakadaro kana ndiri muIndiana, ndiri tsotsi, asi kana ndiri Illinois nemufambiro mumwechete, ini ndiri munhu akasununguka. Uye saka zvinogadza ino yevaranda nyika, yemahara nyika mhando yedambudziko. Zvakanaka haisi muranda mamiriro, imhosva nyika, asi kana iwe ukaita mhosva munhu, iwe unogona kuvaita muranda maererano ne13th Amendment. Saka zvinogadzira isina-yunifomu yemubatanidzwa mutemo inobata vanhu nenzira dzakasiyana zvichibva pane iyo mamiriro ivo vari mune imwe nhanho.
[inaudible 00:42:48] chaiko, nekuti ini handisi iro gweta remutemo, ini ndingori nyanzvi pano. Saka zvakaita sehafu yenyika ndeye iyo inoti, "Zvakanaka, isu tiri mumwe nemumwe toita zvinhu zvedu pachedu," sekunge cannabis pamutemo, ndizvozvo. Uye dzimwe tsika hadzina izvozvo uye zvichiri kuita zviri pamutemo zvisiri pamutemo zvachose. Nekure nyaya iyoyo, saka ndedzipi dzimwe nyaya dzakadai dziriko muAmerica kunyange?
Tese tinogona kubvuma kuti mwana fucking yakaipa, asi hatigone kubvuma kuti ichi chinomera chirimwa chinofanirwa kuve… Ndiro dambudziko. Zviitiko zveHurumende ini ndinofunga chinhu chikuru, nekuti kana paine mimwe mibvunzo yakadzama munharaunda yedu kuti vanozogumburisa. Pane mimwe mibvunzo yatinofanira kubvunza, asi uyu mubvunzo wakatopindurwa. Tinoda kuti fucking ikure, pamutemo zvinhu mune imwe nhanho, dzidzisa mumwe nemumwe, sekuziva kwedu tese kunwa zvakanyanyisa zvakaipa, uye zvichaitika [crosstalk 00:43:38]. Asi uriku-
Ini ndinofunga izvo zvakakosha kuti unzwisise ndezvekuti kana iwe uchifunga nezvemakambani makuru, zvakanyanya kuoma kwavari kuita sarudzo. Vanotora nguva yakareba. Ivo vane bhodhi revatungamiriri, vane vane masheya avo ekupindura, iwe kana uchitaura nezvemakambani madiki, vanogona kuita zvisarudzo nekukurumidza. Zvakafanana chaizvo nenyika dzinopesana nehurumende yemubatanidzwa. Federal hurumende ngarava huru inoedza kuti ishandure uye ivo havangogone kutendeuka nekukurumidza senge nyika inogona kutendeuka.
Uye saka ivo vari kuyedza kutora aya eana matanho uye kuhukura kutenderera nenyaya yacho uye kuwana chimwe chinhu chinosundidzirwa mberi uye zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo ndine chokwadi chekuti zvichange zvichisiiwa izvi federal kurambidzwa kwecannabis. Ingori ngarava yacho yakakura uye iri huru, zvakanyanya kuoma kufamba.
Ehe. Asi vangani mimwe mibvunzo yetsika iriko kunze uko seiyi? Hapana zvandinogona kufunga nezvazvo.
Ndokusaka ndichiita cannabis mutemo, nekuti yakasarudzika uye dzakasiyana kwazvo. Ndokusaka vakomana seni naThomas ndinofunga vari… Zvakakosha kana ndichiudza vanhu kana iwe uri wekuyedza kutanga kambani ye cannabis uye usiri kubata negweta rinonyatsoziva zvavari kuita ne cannabis, iwe uchamhanyisa mumhando dzese dzekusungira, nekuti haina kufanana neiyi imwe indasitiri. Vanhu vanogona kuzvienzanisa nedoro mune dzimwe idzi nzvimbo dzevaraidzo, hachisi chidhakwa. Iyo yakadzama nzira.
Iwe mukomana iwe unoziva imwe yemapurisa cannabis gweta iyo yave iri mune hurukuro nguva pfupi yapfuura munhau?
Hongu. Iye mukomana anomiririra-
Parnof. Ini handigone iye zvino, mukomana uyu, ndinoreva, uye Keith Stroup achangotumira email kune ese zvakajairwa pamutemo zano pamusoro pake, asi ndinofunga iye ndewakawanda wegweta remutemo wekudzivirira mhosva nenzira yekuti iye anoda cannabis nemutsotsi wake. vatengi zvinonzwika, asi ini handifunge kuti vanozviti zvinonzwika muchikoro chemutemo. Ini ndinofunga vanozviti nekushingairira, asi zvakadaro hongu, ini handigoni kuyeuka zita rake, asi igweta remutemo akapara
Roddy. Ini ndinongofunga chokwadi chekuti iye [inaudible 00:45:38] paari kurwira hunhu hwembanje kumatare, asi zvakadaro panguva imwecheteyo akawana kuti abatsire kudzivirira mukomana uyu ari kukandirwa ipapo, kunge nhau dzenyika . Zvakanaka hongu, imari, asi-
Tarisa uone sekunge ndicho chinhu. Kana iye anobhadhara mari iyoyo yaakawana, zvisina kunaka-kubva kuUkraine uye anozvibhadhara kuna Sly kana chero zita rake, obva atora iya kubhangi yake oisa mari yake. Ivo havamudzinge kunze nekuti iye ingwe 2 MRB. Zvino, kana ini ndikaedza kuzviita kune yangu mutemo fakiti, nekuti mutengi wangu anondibhadhara makumi mashanu, zvakanaka anondibhadhara madhora zviuru zana kuenda kunomhan'ara nyika yeI Illinois kuti ndigokwanisa kubhadhara rezinesi. Bhengi rangu rinogona kundivharira pasi, nekuti vanenge vakaita kunge, “Kwete, zvakasiyana iwe unoona, kana iwe uri kudzivirira mumwe munhu mhosva, zvakanaka. "Asi kana uri kudzivirira mumwe munhu kuti atyore mhosva, uri mutyi wechipiri" MRB. "
Ehe, hongu. Ndinoreva, ndinofunga izvo musiyano Ini ndinofunga isu se magweta munzvimbo ye cannabis chaizvo tiptoe pa nekuti nehunyanzvi kana isu tiri… Kana uchidzivirira tsotsi, unobvumidzwa kudzivirira tsotsi. Asi kusvika padanho rekuti mbanje haibvumidzwe pamutemo, kana iwe uchiedza kufambisa chinhu chakabikwa checannabis uye uchiita chibvumirano cheM & A, iwe uri kuita real estate deal, chero chingave chiri-
Izvo zvakafanana nekuwana mhosva dzakasiyana dzemubatanidzwa ipapo.
Kuti unzwisise, kukosha kwevakomana vako, kukosha kwevakomana vako. Tom ndewako naDustin's sekusvika parutivi bhizinesi side rezvinhu, zvakaita senzira iyo muAmerican yatingagumisa bhizinesi uye, ndeyekugara kwedu. Zviri isu isu, zvibvumirano zvako uye chii. Hazvina kufanana-
Huye, America pamsoro payo chibvumirano. [inaudible 00:47:20] bumbiro iri, saka seAmerican yakanyatsobereka iyi pfungwa yepamutemo. Ndakaona kuti unogona kuteedzera masangano kudzoka zvakare kuDutch East India Company. Asi izvo zvakaitirwa veDutch, sekuziva kwamunoita, kubva pane pfungwa yenyika iri mubatanidzwa iyo inobvumidza mamwe masangano nemamwe zvibvumirano kuti isimbiswe. Zvichakadaro America haina kufanana neimwe nyika yaivapo isati yasvika.
Ehe. Uye kungotenderera back pane zvataitaura nezvayo nenyika [inaudible 00: 47]], ikozvino dzimwe nyika dzichava mhosva uye nedzimwe nyika hazvizove mhosva. Iyo inogadzira marudzi ese evhiringidzo. Izvo zvatisati tamboona muindasitiri mamiriro ezvinhu aya maMSO aya, Multi-state Operators ari kushanda. Ivo vanofanirwa kuve nemalebula akasiyana uye maSOP akasiyana epasireti imwe neimwe yavanotevedzera. Izvo hazvina kunyatsoshanda. Ndosaka ndichibatikana kwazvo muASTM D49 inova ndiwo madyirekisheni epasi rese ekambani ye cannabis. Uye kudzamara tave nemazinga epasi rose pamaitiro atinofanira kuyedza zvigadzirwa zvedu, mabhezisiro aifanira kunyorwa, maitiro
Kusvika isu takamira nenzira dzakajairika dzekuita zvinhu, iyo indasitiri ichaenderera mberi isina kunyatsoshanda, uye mutengo wekuita bhizinesi kumakambani aya cannabis unenge wakakwira zvakanyanya. Uye ndosaka ndichifunga mamwe emitengo iyi yemasheya iwe urikuona plummet ndinoreva kune zvakawanda zvikonzero. Asi chimwe chazvo chakarurama, hapana mumwe angave akamboona zvakadarika mutengo uripo wekutevera kuri nyore kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe. Iwe haugone kungova, "Hei aya matura edu uye aya ndiwo maitiro atinenge tichitengesa mune imwe neimwe nyika." Kwete, imwe neimwe nyika kana iwe uri MSO, iwe unofanirwa kuve neese nyika ine zvinyorwa zvayo uye fungidzira chii? Iwe zvirinani ugare pamusoro pese panoshandurwa zviri pamutemo zvine chekuita neaya maina nekuti mutemo unoshandura nekukurumidza mune imwe neimwe mamiriro. Saka usaende kunotenga zvinyoro zviuru zana nekuti unogona kuzvichengetera mapeni pachezviri nekuti zvinogona kuchinja zuva rinotevera. Saka pane matani ematambudziko chete.
Yep aiwa. Nekuti imwe neimwe nyika ine yayo chinhu. Uyezve unofanirwa kuve necheni yekugovera uye chinyorwa chekugovera chiri padunhu nepasi pacharo. Nekuti zvese zvigadzirwa zvinofanirwa kuve zvakakura mune yakatarwa mamiriro. Saka haugone kuwana chero hupfumi kuyera kubva pakuva anoteedzera mashandiro aunokwanisa aya maMSO. Asi zvino zvaunogona kuwana ndeye yakakwira mutengo wekuita bhizinesi, nekuti zvakare kana mumwe munhu akangoona iwe uri mumutambo we cannabis, iwe unofanirwa kubata mari yese uye ivo vanogadzira mitengo yako nekuti ivo vanofunga kuti uri kuita mari. ruoko pamusoro chibhakera.
Uye isu taitaura tichidzosera nezve imwe nhamba yevarimisi uye ndeipi mhando yemari yemhasuru yavanogona kurasa. Ehe, bhizimusi rekufambisa mari, asi riri hombe uye bhizinesi rakawandisa mari. Saka nekuda kwekuti inogona kufema yakawanda, hazvireve kuti haina mari yakawanda kuzviita kana iwe ukatowana iwo mvumo yekuazviita. Uye izvi zvinhu zvese zviri kugadzira matambudziko.
Asi chimwe chezvinhu chatinofanira kufambidzana nacho mukati memakore gumi anotevera iri mbanje yekutengesa kodhi, kana iyo cannabis yekushambadzira kodhi, kana chimwe chinhu senge icho iwe chaunotora uye iwe unosimbisa izvi. Nekuti ichaita senge mimwe mitemo, seERA ichangosvika pagungano reiyo makumi matatu nemasere. Yakapfuudzwa mumakumi manomwe, ndizvozvo. Asi zvadaro isu tanga tine izvo, ndinofunga yaive 38th Amendment iyo yakapasiswa muna 70. Asi zvakatora kusvika makore mashoma apfuura zvisati zvanyatso nyorwa. Handizive, handisi mudzidzi wezvebumbiro, handisati ndambove mudzidzi wezvebumbiro.
Chikoro chemutemo ndakanga ndiri nani pane bumbiro remutemo kupfuura zvandiri kuita iye zvino.
Ehe. Nekuti iwe chaiye, zvaive zvakakodzerana nehupenyu hwako ipapo. Asi zvakanaka. Uye ndosaka ndichiida, nekuti inyaya yakaitika uye inyaya isingaite chero chinhu chipi zvacho uye ine mashandisiro akawanda akasiyana. Saka hazvisi zvekurima chete, kutevedza, kubatanidzwa, zvinobata pazvinhu zvese izvozvo uye zvinonakidza.
Uye chimwe chezvinhu chandaida kuzongotenderedza ndechekuti takataura pamusoro pekuti muFlorida pakutanga yaive yakaderera THC uye ipapo hatina kuziva ... Isu takanga tisina hunhu hwemaruva uye hwakashandurwa mune yekupedzisira mutemo chikamu. Zvino tava neruva rinoputa, uye ini ndokuudza iwe ikozvino marezinesi haugone kuburitsa nekukurumidza zvakakwana-
… Chero munhu aigona kunge akafanofungidzira kudikanwa kweruva. Uye munhu wese akafara pamusoro peshoko nezvimwe zvinhu izvi, ruva-
Miggy, iwe wafungidzira izvozvo?
Shamwari, saka pawanga uchitaura pamusoro pehuwandu hwapfuura, izvi zvese zvinofungidzira. Musika we cannabis wakakura. Icho chokwadi chekuti iwe mukomana wakatanga nevano kugadzira, [inaudible 00:51:48] yako tsika, iyo chero, yako mutengi ruzivo. Asi ikozvino iwe uine vanhu vazhinji, vakasiyana-siyana, ruzivo rwakawanda. Ichashanduka kuita chinhu chayo, chayo ... Pane mumwe munhu anogona kuita zviitiko. Pane mumwe munhu anozo… Sezvese zvinhu zvese zvinoita sekunge uri kutaura nezvako nevatakuri uye chii.
Ndiro zano rakanakisa ipapo ipapo kuti kupaza iro rakavhurika kuti iwe uwane vese mabhizinesi anobatsira kunze uko. Asi iwe wakati iwe chimwe chinhu chandaifunga kuti chinonakidza, nekuti ini handisi gweta reFlorida. Handifungi kumbobvira ndatora bvunzo dzeFlorida. Tichaona zvinoitika mune ramangwana. Asi saka imi vakomana munoita shanduko kubumbiro uye iyo iyo paramende inotanga kuchinja kune izvo? Nekuti iwe wakati izvo izvo zvakagadziriswa zvakati, "Yakadzika THC, hapana ruva rinogona kurohwa." Uye saka ikozvino vakabvisa iyo yakaderera THC uye inosvuta yemaruva chimiro.
Saka iyo THC yakaderera yaive kuburikidza nemutemo pamberi pekugadziriswa kwebumbiro. Ipapo kugadziriswa kwebumbiro kwakapinda uye kwakanyatsobvumirwa yakakwira THC chigadzirwa. Bumbiro rakanga rakanyarara zvine chekuita nekuputa asi kuburikidza ne… Asi pakanga paine nyaya dzakamisikidzwa uye nemumatare, zvine musoro kuti gavhuna, gavhuna paakauya, akaisa mutemo wekuti anga ari mubatsiri wekuputa mbanje. Uye saka vakadzokorora mutemo iwo kuti ubvumidzwe.
Pakange paine kupokana kukuru pakuisa THC cap. Uye kubva pane zvandiri kunzwisisa mune ino inotevera yemutemo chikamu, pane kumwe kushinha kuedza kuisa THC cap pane yedu yekurapa mbanje chirongwa. Zviri pachena, izvo ndizvo zvinonakidza nezve indasitiri. Tinogara tichiedza kufambira mberi, asi isu tinofanirawo kuramba tichirwa kuti tibate chimiro chedu. Saka iko zvino vanobvumirwa kuva nehupfumi hwepamusoro hweTHC yekurapa muFlorida. But that [crosstalk 00:53:38] -
Imi vakomana mune akafanana neiyo peni dzevape? Nekuti ichi chi ... Icho chisikwa inyasha mune hutano, asi pamwe dzaive dzinogona kuita 80% cannabinoids apo yaive-
Ehe, isu tine vape pens. Zvatisina, saka zvinonakidza ndezvemutemo inobvumirwa edibles, asi Dhipatimendi reAg neDhipatimendi rehutano rinofanirwa kushanda pamwe chete pamitemo yakarebesa uye edible mitemo haina kubuda. Saka parizvino muFlorida hatina edibles, yandinofunga kuti ... ndinofunga vanhu vazhinji vanofarira edibles uye zvinosuwisa kuti varwere vedu havawane edibles. Chimwezve chinhu chinonakidza muFlorida chatakamirira ndechekuti ivo havana kubvumidza chero chechitatu bato rekuedza labs muFlorida.
Ehe, ini ndinomiririra Green Sayenzi Labs, inova imwe yemahofisi ekutanga ekuongorora pano muFlorida. Uye ivo, dhipatimendi rehutano harisati rawana mukana wekuisa mutemo wechitatu wemuedzo. Zvino ivo vangoisa mutemo wekukurumidzira usina kugamuchirwa unobva waisa… Saka iko zvino rechitatu rechitatu bvunzo dzeLabhu, Dhipatimendi rehutano riri kuvabvumidza kubata mbanje zvakangoita chibvumirano. Iko hakuna rezinesi kunoitwa nevechitatu bato rekuongorora, ivo vanongofanirwa kubvumidzwa neMMTC, Medical Marijuana Kurapa Center kuti vakwanise kuita izvo zvekuedza, izvo zviri kuumba marudzi ese enyaya. Uye nokutendeseka, iko zvino muFlorida kunoongororwa kwacho kunozvidzora, zvinoreva kuti tarisa, aya mabhizinesi uye kana asingafanirwe kuyedza chimwe chinhu, kana achigona kufona-
[crosstalk 00:55:05] inozvidzora, iwe unofanirwa kubata neFAA. Asi izvo zviri kuuya mu Illinois zvakare kwavasina ... ndinoreva, vakataura zvinhu pamusoro pekuyedza. Kune ma Lab ekuedza asi ivo havana kuvhurira ma Labs matsva ekuedza uye ndizvo zvimwe zvebhizimusi rekuwedzera. Vari kuyedza kuyedza kuWashington State, handizvo?
Ehe. Ehe. Ehe, vamwe vamiriri veparamende vari kuyedza kusundidzira vamwe bhonshit 10% bhiri. Saka tinovimba kuti, ndinoreva kuti, sekureva kwako, iwe kusvika zvakanyanya uye saka unofanirwa kurwira izvo zvaunazvo kare.
Kunyanya [inaudible 00:55:37] nzira, haina kumira. Iyo inodzoka uye yakafanana, "Ah, o, uri kuishandisa mune yakasimbiswa fomu?" "Hongu."
Zvakanaka, mibvunzo yandinongobvunza ndeyekuti, "Sei? "Nei zvichikosha kuti tiite izvi?"
Ndiratidze [crosstalk 00:55:50] pane chinomera ichi chakakubata? Ndinoreva, zvakadzama, chii chakaita kwauri kwauri?
Ehe. Huye, pakanga paine… Uye mumwedzi mishoma yapfuura vaunza vanhu vazhinji, vazhinji vevanachiremba mukati, vazhinji vekunze-vatambi vaitamba vaipesana necannabis uye muTallahassee maive nevatauri vakawanda vaive kuenda kunze uko. Uye ivo vaive nematanho eruzivo uye nekunzwa kwaive uko vanachiremba ava vaitaura zvakanyanya nezve nengozi dzemhando yepamusoro yeTHC. Uye ini ndichakuudza, zvakagadzira kutsamwa kukuru nevazhinji vanachiremba vandinoshanda navo. Uye iwe unoziva, ikozvino ivo vari kutanga kuisa pachavo ruzivo ruzivo zvikamu, vachitsanangura nei zvakakosha kuti chaizvo uwane kuwana kune yakakwira THC.
Uye nokutendeseka izvozvi, chii chingave… Dai vaizoita chimwe chinhu apo ivo vanoregedza kunze kweiyo THC huwandu. Chii chinonakidza ndechekuti zvese zvimarara uye zvese bio-mhando izvo zvavari kukura izvozvi kana kuti zvakanyanya chikamu ndeye yakakwira THC, handiti? Saka kana iwo mutemo waizopinda, zvine musoro kuti makambani eFlorida aizozvikonzeresa zvakare nematambudziko ese nemhando dzakasiyana siyana uye zvese zvavari kuita, izvo zvaizokonzeresa nyaya yose nekuwana kwemurwere uye nemhando dzakasiyana siyana dzakasiyana. Ndine tariro kuti-
Zvinotaridza sekunge vari kuyedza kudzikamisa mazinga eTC.
Ndeipi yepamusoro siling yavari kuyedza kuganhurira kwairi?
10% ndiyo yavaikurukura.
Kwete, zvakada kufanana, dai tine Ethan Russo, Dr. Russo pamhepo, angaita seanoti, "Kwete, iro rakanongedza nhanho mbiri dzeChemovar." Mupfungwa yekuti ndidzo dziya dzakaringana, nekuti iwe une zvikamu makumi maviri nezvishanu, iyo inowanzove yako CBD hemp, senge yako yekusimudza mitsetse. Uye ipapo iwe uine chikamu chakapesana chekuti dzimwe nguva chinongova zvese THC uye izvo zvingaite seGorilla Glue yako. Uye saka kana iwe wakazviita se gorilla inosimudza, saka izvo zvinofanirwa kuve zvakanyanya zveyakaenzana-kune-imwe THC CBD chiyero. Uye kunyange izvo zvinogona kuenda pamusoro pegumi%, saka iwe uchazofanirwa kunge uchitarisa maruva ako. Uye saka iwe unowana, zvingave sekutaura kuti iwe unofanirwa kutora maapuro ese kana angaibva.
Ini ndinofunga chii, isu tichangoputa zvimwe. Kana iwe wakataura zvakanyanya pamusoro pegumi muzana yeTHC mbanje, iwe unenge uchinge uchingopedza mbanje yakawanda uye pamwe ungawedzera kwakanyanya. Ingo kushandisa mari yakawanda. Saka zvichazokuvadza mutengi, murwere anofanira kutenga imwe mbanje kuti angosvika-
Iko hakuna imba yevarwere inokura muFlorida ikozvino, handizvo?
Zvakarurama. Saka kukura kwemumba inyaya hombe. Zviripachena 22 marezinesi ndeawo ini ndinofunga angangoenda kunogadzirira kuchirwisa. Uye iwo marezinesi makumi maviri neva-
Kune varwere kana kune vakuru?
Ini handifunge kuti makumi maviri nenesi vachada kuti kumba ukure zviitike.
Ehe, tarisa, handizive. Asi pakupera kwezuva, aya marezinesi makumi maviri nemaviri, sezvandataura, muFlorida imusika wakakura. Aya marezinesi makumi maviri nemasere ane mari yakawanda kumashure kwavo uye vazhinji vevamakombi vari kuTallahassee izvozvi varikuvamirira. Saka ndicho chimwe chezvikanganiso chikuru chaungazofanira kuwana pamusoro pacho ndechekuti iwe uchave nemesiere makumi maviri nemasere uchishandisa mari yakawanda yekuchengetera imba kuchengetedza imba ichikura kubva [inaudible 22:22:22]. Zvino tarisa, handizive, panogona kunge paine… Ini handina kutaura naye, ini handidi kutaura pachinzvimbo chevashandisi vese. Zvimwe vamwe vacho vari kutsigira. Asi kubva pane yakajeka maonero, kazhinji ivo vanotora imwe mhando yenzvimbo yekupesana nemba yakakura.
Iwe unoziva, imi vakomana muri kurasikirwa nemari yakawandisa yekutaura kuti mafaro achaendawo kumadhora ekushanya. Nekuti iko zvino kurapwa kwako kwakavimbiswa 100%. Ndinoreva kuti, panogona kunge pasina chavanoti kukwezveredza, siya nyika, zvimwe. Asi ini ndinokuvimbisa iwe wandei kuti izvo zvekurapa zvinotenga zviri kuenda kune vagari venzvimbo, varwere vasiri vekurapa. Saka kana vachinge vawana icho chekurapa kutenga chekutandara, kana chinotandara kutenga, iwe unenge uri kudhonza mune iye mukomana anga achidhonza izvo zvaanodaidza nhema musika, asi shamwari yake iri yekurapa. Iwe hausi kuwana iyo musika pamwe nekushanya. Sokuda kwako iwe vakunda kushanya, ndizvo zvaunorarama.
Ah, izvo zvinopenga. Ndiri kureva, ndosaka vanhu ava vari kushandisa mari yakawanda kudaro pane rezinesi pasi apa, handiti? Ndinoreva, tarisa, havasi kuzviita kune varwere mazana matatu ezviuru. Ivo vari kuzviitira kune makumi maviri emamiriyoni ehuwandu hwevanhu isu vatinayo, pamwe nekushanya kwese kwatinako. Saka vanhu ava havasi… Hatina vanhu vanosaina cheki yemadhora makumi mashanu emamiriyoni emapepa chete nekuti vanofunga kuti vanogona kuwana varwere mazana matatu. Vari kuzviita nekuti ivo vanoona kuti kana nhandaro ichiitika kuno muFlorida, ichave iri mukana wakakura. Uye nokutendeseka, ichave gangbusters.
Pachave nemari yakawanda, yakawanda mari inogadzirwa. Pachave nemakwikwi mazhinji. Unoziva zvandiri kureva? Tarisa, pakupera kwezuva, zvinoita sebhizinesi. Iwe unofanirwa kugona vakomana, ndinoudza vanhu vazhinji, ivo vanoda kupinda mune ino indasitiri, vanofunga kuti iri nyore mari. Kwete, rakafanana nerimwe bhizimusi. Unofanira kuva wakangwara. Iwe unofanirwa kushanda nevanhu vanoziva zvavari kuita, shanda nevamiriri vechokwadi, maakaunti akakodzera, vanhu vane mari, varidzi vemabhizimusi, uye unofanirwa kukwikwidza. Senge chero rimwe bhizinesi. Hapana nzira iri nyore yekuita bhuru-
Izvo zvakakura, izvo zvinogona kutidzosa kune chimwe chinhu chatinogona mhando yekuputira pano. Saka Dustin, weFlorida mbanje muna 2020, chii iwe chauri kuona chiri kuitika?
Zvakanaka, Florida mbanje muna 2020? Saka izvozvi isu tine iyi Supreme Court kesi inoitika. Isuwo tine iro bhajeti randaitaura nezvaro riri muparamende. Handisi kuona iro bhiri richidarika. Ndine tariro, kana zvikadaro izvo zvingave zvakanaka, tichava nemafaro pano. Handisi kuona iro bhiri richidarika. Ini handione muparamende ari kuita chero chinhu kusvikira dare rePamusoro reFlorida rapa mutongo panyaya iyoyo. Mhosva, iyo yeFlorida Grown kesi. Ndiro kambani yakaunza chikwereti uye ndinotarisira kuti Dare Repamusorosoro richapa mutongo pamusoro pazvo mumwedzi mishoma inotevera, vachifungidzira kuti vakasimbisa matare epasi. Iyo paramende inofanirwa kudzokera kumashure kune imwe yakakosha musangano. Ivo vanozofanira kudzokorora mutemo. Isu tese tinoziva kuti maitiro emitemo anogona kutora nguva yakareba.
Ipapo iyo DOH ichafanirwa kuburitsa mitsva memo uye ipapo iyo DOH ichafanira kuburitsa maitiro. Uye ipapo vanozotanga kugamuchira zvikumbiro. Saka, ndine tariro huru, kuti tinogona kuve nemarezinesi akapihwa muna 2020. Ndine chokwadi, ndine chokwadi chekuti tichava nemarezinesi akapihwa muna 2020. Zvinotyisa kuti hakuzove nemarezinesi akawedzerwa kusvikira zvishoma 2021 zvinosuruvarisa.
Asi ini ndine tariro, uye ndosaka ndiri kuwana anoshingairira mune dzimwe nyika. Ndosaka ndakashanda newe pane zvimwe zvekushandisa zveI Illinois. Ndiri kuronga kushanda newe pane zvimwe zvekuwedzera zvatave kuwana. Ndakawana boka muWest Virginia. Ndine boka rekushanda muGeorgia ini ndiri kushanda naro. Chaizvoizvo kushanda nemapoka akasiyana siyana kwakasiyana-siyana kuvabatsira kuti vawane mukana. Uye yakawanda yavo ndeye Florida makambani akavakirwa ayo ari kutsvaga kuwedzera kune dzimwe nyika zvakare, zvakadaro.
Asi pane zvakawanda zvezvinhu zvinofanirwa kuitwa. Ndinovimba kuti, sekutaura kwandakaita, wechitatu anoedza lab maru, ndinotarisira kuti achabuda. Ndinovimba kuti kuchave nekupa marezenenzi mamwe eaya echitatu ekuongororwa ma Labs kuti ... Uye kamwe zvakare, tenderedza shure, ndezve murwere. Ndinoda kuti murwere awane chigadzirwa chakanakisa chavave vanogona kuwana. Uye kana ichi chigadzirwa chisiri chiri chidiki kuzvidzora maererano nekuongororwa, kune njodzi dzakawanda dzekuti chimwe chigadzirwa ichi kuiswa pamusika weFlorida hachiongororwe zvizere uye-
Izvo zvinongotora chiyeuchidzo chimwe kana mumwe munhu akawana chaicho tsvimbo. [crosstalk 01:02:36] Saka vanhu vangakuwana kupi iwe murume?
Vaigona kundiwana, mutemo wangu firm is www.mrcannabislaw.com, ndiyo M-Rcannabis law.com. Iwe unokwanisa zvakare kunditevera pane ese media media ku #mrcannabislaw.
Zvikuru. Zvakanaka, ndinokutendai chaizvo nekuuya pachiratidziro [crosstalk 01:02:55]. Uye Florida painokudziridza zvinhu zvitsva, ndapota dzoka togovana ...
Illinois Cannabis Nhau neChillinois neCannaKweens
by Lauryn | Jul 27, 2020 | 2020 Federal Cannabis Pamutemo Marijuana Policy Project, Ancillary Cannabis Bhizinesi, Cannabis Pamutemo 2020 Marijuana Mutemo Reform Keith Stroup NORML, Cannabis Pamutemo Nhau, Cannabis News Kugadziridza, Illinois Cannabis Nhau neChillinois neCannaKweens, zvemutemo nhau, Mutemo, Mitemo yeHurumende
Illinois Cannabis Nhau neChillinois Illinois cannabis nhau ndedzemhando mu limbo izvozvi. Vazhinji vakamirira kunzwa kubva kubazi rezvekurima pamusoro pekuti kunyorera kwavo basa kana kuti kwete. Justine Warnick naCole Preston kubva ...
Flash Kutonhora Kuisa Cannis uye Cannabis Sublimation
by Lauryn | Jul 27, 2020 | Cannabis Pamutemo Nhau, Flash Kutonhora Kuisa Cannis uye Cannabis Sublimation
Flash Kutonhora Cannabis uye Cannabis Sublimation Flash kusunungura cannabis uye cannabis sublimation iri kukura mukuzivikanwa pakati pevanofarira cannabis. Zvigadzirwa senge Space Weed zvinoshandisa tekinoroji iyi kurapa cannabis yavo inowanzobereka maruva akasimba. Luc ...
Cannabis uye Autism
by Lauryn | Jul 14, 2020 | Cannabis Autism Alliance yeOhio, Cannabis News Kugadziridza, zvemutemo nhau, Marijuana yeMishonga, Varwere Kunze Kwenguva
Cannabis uye Autism Cannabis uye autism - misoro miviri yakasangana inoda nzira kutarisisa. Kunyangwe paine zvidzidzo zvinove zviri zviviri uye zvinopesana nekushandiswa kwe cannabis kurapa zviratidzo zve autism, vatengi vazhinji vanofunga cannabis ndiyo yakanyanya kurapa uye yakachengeteka kurapwa. Tiffany ...
Pennsylvania Adult-Shandisa Cannabis Mirairo
by Lauryn | Jul 14, 2020 | 2020 Federal Cannabis Pamutemo Marijuana Policy Project, Cannabis Pamutemo 2020 Marijuana Mutemo Reform Keith Stroup NORML, Cannabis Pamutemo Nhau, Cannabis pane Bhoti, Pennsylvania Adult-Shandisa Cannabis Mirairo, Pennsylvania Cannabis Gweta raPatrick Nightingale, Mitemo yeHurumende
Pennsylvania Adult-Shandisa Cannabis Mirairo Pennsylvania vanhu vakuru-kushandisa cannabis mitemo iri pane yePenny cannabis yega yega pfungwa. Pennsylvania yaigona kuona zvekuvaraidza (vakuru-kushandisa) cannabis vanouya kudunhu ravo kana SB 350 ichipfuura. Senator Leach wePennsylvania anotibatana ...
Chii chinonzi 710?
by Lauryn | Jul 9, 2020 | Vanogona Kuedza, Cannabis Pamutemo Nhau, Chii chinonzi 710 Nyika Dab Zuva
Chii chinonzi 710? Chii chinonzi 710? BHO yakabva kupi? Dabs vakatora sei nyika? Munyori wenhoroondo wePot, David Bienenstock weGreat Moments in Weed Nhoroondo, anotibatana kupemberera 710 uye anotipa chakajeka nhoroondo chidzidzo pane kwakabva kuzororo iri rakakura. Zviteerere pazviri ...
Maitiro ekuvhura Dispensary muOklahoma
by Lauryn | Jul 6, 2020 | 2020 Federal Cannabis Pamutemo Marijuana Policy Project, Cannabis Pamutemo 2020 Marijuana Mutemo Reform Keith Stroup NORML, Cannabis Pamutemo Nhau, Cannabis News Kugadziridza, Maitiro ekuvhura Dispensary muOklahoma, Mitemo yeHurumende
Maitiro ekuvhura Dispensary muOklahoma Kuvhura iyo disensary mu Oklahoma mitengo yekutanga-yakaderera zvakanyanya kudarika mamwe matunhu mazhinji epamutemo. Kuti iwe uvhure disensary mu Oklahoma, zvinodikanwa kuti uwane ruzivo rwakakodzera uye funga zvimwe zvezvakakosha ...
Nzira yekutanga Kwemutemo Kura Op
by Lauryn | Jul 6, 2020 | Cannabis Pamutemo Nhau, Cannabis Proformas yeDispensaries uye Grows Vigland Advisors, Nzira yekutanga Kwemutemo Kura Op
Maitiro Ekutanga Yemutemo Kura Op Maitiro ekutanga zviri pamutemo kukura op ingave wekutanga mubvunzo waunobvunza iwe kana kunyoreswa kunouya kudunhu rako. Kana iwe wakambokura wako wega cannabis chirimwa kumba unotoziva kuti haisi kufamba mupaki. Fungidzira uchitora chirimwa chimwe icho ...
Cannis Inomutemo muUK?
by Lauryn | Jul 6, 2020 | Cannabis News Kugadziridza, International Cannabis, epasi rese cannabis nhau, Cannis Inomutemo muUK?
Cannabis muUnited Kingdom Cannabis zviri pamutemo kuUK? Iyo UK ine chirongwa chekurapa mbanje asi iwe unoshamiswa (kana kuti zvimwe kwete) kuti uone kuti vangani vanhu vari chaizvo varwere pasi pechirongwa. Elliott Rolfe naNick Nzeve kubva Mackrell.Solicitors ...
Zvinodiwa Nevabereki Kuti Vazive nezve CBD
by Lauryn | Jun 24, 2020 | CBD Nhau, Green Ngirozi CBD, Hemp CBD, Zvinodiwa Nevabereki Kuti Vazive nezve CBD
Izvo Zvinodiwa Nevabereki Kuti Vazive nezve CBD Hezvino izvo izvo vabereki vanofanirwa kuziva nezve CBD. CBD haisi tsika chete - iko kufamba - uye yakabatsira ruzhinji kuona cannabis muchiedza chitsva. Kim Barker anobva kuCKSoul ajoina kukurukura kuti CBD iri kuchinja sei kurapwa ...
Chirongwa cheR3 & Grants muIllinois
by Lauryn | Jun 17, 2020 | 2020 Federal Cannabis Pamutemo Marijuana Policy Project, Cannabis Pamutemo Nhau, Illinois vakuru vashandise cannabis, Illinois Yakanyoreswa Zviri pamutemo Yekuvaraidza Cannabis Rep. Jehan Gordon-Booth Bill 2020, R3 Grant muIllinois, Kuenzana Kwemagariro
R3 Chirongwa & Grant muI Illinois Iyo R3 Chirongwa chinopa Grant muIllinois akagadzirwa senzira yekururamisa zvimwe zvisiri izvo zveHondo pazvinodhaka. Nguva pfupi yapfuura zvakaziviswa kuti, kubvira Chivabvu 19, 2020, Illinois akagovera $ 31.5 miriyoni pamitero yemitero yeiyo R3 ...